Ugu yaraan 22 qof oo ku dhimatay dab qabsaday warshad kutaala dalka Bangladesh - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 22 qof oo ku dhimatay dab qabsaday warshad kutaala dalka Bangladesh
September 10, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Warshada gubatay oo kutaala dalka Bangladesh. Sawirka: Aljazeera.
Dhaka-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dab uu qabsaday warshad samaysa qolofta alaabaha lagu galeeyo oo kutaala waqooyiga caasimada dalka Bangladesh ee Dhaka.
Wargeyska Dhaka Tribune ayaa tabiyay maanta oo Sabti ah in dabka uu ka dhashay qarax taangi ee warshada Tampako oo kutaala magaalada warshadaha ee Tongo oo 20km dhanka waqooyiga kaga beegan caasimada.
Dhibaatooyinka uu sababo dabku ayaa kusoo noqnoqda warshadaha kuyaala wadamada Koonfurta qaarada Aasiya, iyadoo ay aad u hoosayso qaabka nabadgalyada shaqaalaha ee ka shaqeeya.
September 19, 2016 Ninkii qaaday weerar mindiyayn ahaa oo ka dhacay xarun dukaamaysi oo kutaala Minnesota oo la aqoonsaday in uu Soomaali ahaa
July 2, 2016 20 qof oo lagu dilay weerar ka dhacay makhaayad kutaala Bangladesh
September 9, 2018 Ugu yaraan 19 qof oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay Koonfur Suudaan
Murashaxa madaxweynaha Soomaaliya Faroole oo u jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya in uu xilka wareejiyo